Vivo सामसु from्ग बाट नयाँ Exynos 980 को साथ पहिलो स्मार्टफोन लन्च गर्नेछ Androidsis
Vivo सामसु launchको नयाँ Exynos 980 संग पहिलो स्मार्टफोन लॉन्च गर्ने छ
सामसुले कल हिसाबले सोको एकीकृत G जीको साथ घोषणा गर्‍यो, जुन भनिन्छ Exynos 980। यो एक एक धेरै उन्नत वास्तुकलाको साथ आउँदछ जुन यसलाई माथिल्लो मध्य-दायरा मोबाइल प्लेटफर्मको रूपमा खडा गर्छ, त्यसैले हामी योसँग दृढ प्रतिस्पर्धा गर्न अपेक्षा गर्दछौं। Snapdragon 730 क्वालकॉम, यो Kirin 810 र नयाँ हेलियो G90 Mediatek द्वारा।
Vivo एक चीनियाँ निर्माता हो जुन सधैं सबैमा हुन्छ। यो टेनाका अभिलेखहरूमा अवस्थित छ, प्रमाणित निकाय जसले चीनमा मार्केटिंग हुने टर्मिनलहरूलाई अनुमोदन गर्छ, र त्यसैले यसको उत्पादन सूची विस्तृत छ। अब, अन्य कम्पनीहरुबाट बाहिर खडा हुन, उसले सम्भवतः के हुने हो सुरू गर्ने योजना बनाएको छ सामसु'sको Exynos 980 .० को साथ पहिलो स्मार्टफोन.
आइस युनिभर्स खाता (@UniverseIce) ले ट्विटर मार्फत पोष्ट गर्नुभयो जुनमा यो भन्छ कि भिभो दक्षिण कम्पनीको नयाँ सिस्टम-अन-चिप प्रयोग गर्ने पहिलो कम्पनी हुनेछ। अझ सटीक हुन, यसले हाइलाइट गर्दछ कि यस वर्ष रहस्यमय टर्मिनल अनावरण हुनेछ कि हामी अझै पनी केहि पनि थाहा छैन। यो सम्भावना छ कि यस समय उहाँ सूचीमा हुनुहुन्छ र अर्को अक्टुबर भिभोले आधिकारिक रूपमा यो घोषणा गर्नुहुने छ।
Vivo ले पहिलो सैमसंग Exynos 980 प्रोसेसर को उपयोग को पुष्टि गर्यो, vivo ले भन्यो कि सैमसंग यो प्रोसेसर को विकास गरीयो, यस बर्ष Exynos 980 स्मार्टफोन रिलीज हुनेछ, Exynos 980 सैमसंग को पहिलो एकीकृत 5G SoC, समर्थन SA / NSA, A77 वास्तुकला CPU हो। pic.twitter.com/agauTd2vPO
- बर्फ ब्रह्मांड (@UniverseIce) सेप्टेम्बर 5, 2019
सामसु्गले यस बर्ष अर्धचालक व्यवसायको साथ ठूलो प्रगति गरिरहेको छ। यसका एक्सीनोस प्रोसेसरहरूले यस बर्षका आफ्नै फोनहरू मात्र पावर गरेका छैनन्, तर मोटोरोलाको वन एक्शन र वन भिजन स्मार्टफोनमा पनि भेटिएका छन्। अब, यो Vivo स्मार्टफोनमा आफ्नो बाटो बनाउँदैछ।
एक्सीनोस 980 77० एक चिपसेट हो जुन दुई कर्टेक्स-Az कोर २.२ गीगाहर्ट्जमा छ र छ कोर्टेक्स-ए 2,2 55. कोर १. G गीगाहर्ट्जमा घटेको छ। यसले माली जी 1,8 bo जीपीयूलाई समाहित गर्छ। एक 76nm नोड आकार र-8-बिट वास्तुकला। यसले स्वदेशी रूपमा G जी का लागि समर्थन एकीकृत गर्दछ, यो संग मिल्दो छ सामसु fromबाट नयाँ १० MP MP सेन्सर र प्रति सेकेन्ड १२० फ्रेममा 4K भिडियो रेकर्डि supports समर्थन गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » हाम्रो बारेमा » Vivo सामसु launchको नयाँ Exynos 980 संग पहिलो स्मार्टफोन लॉन्च गर्ने छ
कसरी तपाईंको उपकरण एन्ड्रोइड १० मा अद्यावधिक गर्ने कि यो पहिले नै उपलब्ध छ
नोकिया .6.2.२ र नोकिया .7.2.२: ब्रान्डको नयाँ मध्य-दायरा